Times24 Nepal » भिडियो हेर्नुहोस! दाङमा फेटिईन १६ बर्षिय सुन्दरी माता,कसरी प्राप्त भयो यति ठुलो शक्ति
भिडियो हेर्नुहोस! दाङमा फेटिईन १६ बर्षिय सुन्दरी माता,कसरी प्राप्त भयो यति ठुलो शक्ति
दाङको तुल्सिपुरमा भेटिईन अचम्मकी माता ! जुन देखेर सबै आस्चर्यमा पर्छन । जहाँ १६ बर्षकि कलकलाउदो उमेरमा १ युवती माता बनेर बसेकी छिन। पढ्ने लेख्ने कलकलाउदो उमेरमा उनी माता बनेर बसेकी छिन ।
उनी भुत, बर्तमान, भबिष्य सबै बताउन सक्ने सक्छिन । उनको भनाई अनुसार कसैलाई पनि नछोई छुट्टै खाने छुट्टै बस्ने गर्छिन । उनी सङको कुराकानी सुन्दा अच्मम लाग्छ, आखिर किन यसारी बसिन ? सबैलाई चासोको बिषय बनेको छ ।
हुन त नेपालमा माता र ज्योतिषीहरु जहाँ तहि भेट्न सकिन्छ । कतिपयले यसप्रति बिस्वास गर्छन् भने कतिपय बकवास ठान्दछन । तर पनि बिस्वास राखेर भेट्न जानेको लर्को भने बाक्लै देखिन्छ । कतिपय ज्योतिषी, माताहरुले राजनीति सम्बन्धि भबिस्यबाणी गर्ने, अभिव्यक्ति दिने गरेको पाईन्छ।
जसले गर्दा बिबादमा पनि परिरहेका छन। तर रोजनाले भने यस्तो भबिस्यबाणी क्यामेराको अगाडि गर्न चाहिनन । यस्तै विवादमा तानिने हुनाले क्यामेरा अगाडि यस बिषयमा नबोल्ने उनी बताउछि। बाकी भिडियोमा हेरौ उनी के भन्छिन् !